Javier Tebas oo ka hadlay ciyaaryahanka uu jeclaan lahaa inuu yimaado horyaalka La Liga, muxuuse ka yiri Ronaldo iyo Messi? – Gool FM
Javier Tebas oo ka hadlay ciyaaryahanka uu jeclaan lahaa inuu yimaado horyaalka La Liga, muxuuse ka yiri Ronaldo iyo Messi?
Dajiye November 16, 2018
(Spain) 16 Nof 2018. Madaxweynaha maamulka horyaalka La Liga ee dalka Spain ee Javier Tebas ayaa ah mid ka mid ah shaqsiyaadka ugu muhiimsan qaarada yurub, sababa la xiriira guulaha uu gaarsiiyay horyaalka La Liga.
56 jirkan ayaa gacanta ku dhigay shahaada jaamacadeed, ka hor inta uusan u guurin saaxada kubada cagta sanadii 1993-dii, xiligaas uu noqday madaxweynaha kooxda Huesca fc.
Madaxweynaha maamulka horyaalka La Liga ee dalka Spain Javier Tebas ayaa xiliyadii lasoo dhaafay wuxuu dagaal xoogan kala dhexeeyay madaxweynaha Xiriirka Kubadda Cagta Spain ee Luis Rubiales, sababa la xiriira muranka ka taagan kulanka kooxaha Barcelona iyo Girona in lagu ciyaaro dalka Mareykanka.
Hadaba ugu horeyntii Javier Tebas ayaa waxaa wax laga weydiiyay suurtagalnimada uu Mohamed Salah ku imaan karo horyaalka La Liga iyo caqabadaha haatan horyaalka Spain, gaar ahaan ka dib tan iyo markii uu ka tagay Cristiano Ronaldo kooxda Real Madrid.
“Shaki la’aan Cristiano Ronaldo waa ciyaaryahan caalami ah, waxaana sharaf inoo ah in mudo dhan 9 sano uu qeyb nagala ahaa horyaalka La Liga, laakiin nasiib wanaag, tartanka La Liga waa mid ka weyn hal ciyaaryahan”.
Intaas kadib Madaxweynaha maamulka horyaalka La Liga ee dalka Spain ee Javier Tebas ayaa wax laga weydiiyay in Lionel Messi uu mari doono wadada Cristiano Ronaldo wuxuuna yiri:
“Shaki la’aan Messi waa mid ka mid ah ciyaartoyda ugu fiican aduunka, waana ku faraxsanahay inaan ku heysano horyaalka La Liga, laakiin waxaan ku adkeysanayaa in kooxaha horyaalka Spain aysan ku tiirsaneyn ciyaartoy gaar ah”.
Ugu dambeyn Javier Tebas ayaa wuxuu ka hadlay wararka lala xiriirinayo Mohamed Salah horyaalka La Liga gaar ahaan kooxaha Barcelona iyo Real Madrid.
“Shaki la’aan Mohamed Salah waa mid ka mid ah ciyaartoyda waaweyn ee kubada cagta, waana hubaal inaan soo dhaweyn doono imaatinkiisa horyaalka La Liga, runtii ma aragno xidigo badan ee reer Masar ah ee heysta qaab ciyaareedkiisa oo kale”.
Sergio Ramos oo laga fasaxay xerada tababarka xulka qaranka Spain
Muxuu ka yiri Modric dagaalka ku dhex maray isaga iyo Danny Cevallos kulankii xalay Croatia iyo Spain?